IXiaomi Mi A3 ngoku inokufaka ikhamera kaGoogle ngohlobo lwe-APK | Zonke iinkonzo ze-intanethi
IXiaomi Mi A3 ngoku inokufaka ikhamera yeGoogle
Kwiveki ephelile IXiaomi Mi A3 yathengiswa eSpain. Uluhlu olutsha lwaphakathi lwegama lesiTshayina esebenzisa i-Android One njengenkqubo yokusebenza. Inikwe njengenketho yomdla kweli candelo lentengiso, ke linazo zonke izinto ezithengisa kakuhle. Ngoku kukho iindaba ezimnandi kubasebenzisi ngale fowuni.
Ikhamera kaGoogle Ingafakwa ngokusesikweni kwiXiaomi Mi A3. Inkqubo yekhamera yokutyikitya ithandwa kakhulu kwi-Android kwaye ibonwa ngabaninzi njengeyona ndlela ilungileyo kule ndawo. Ngoku, abasebenzisi banokuyifaka kolu luhlu oluphakathi ngaphandle kweengxaki.
Le Xiaomi Mi A3 iza neprosesa yeQualcomm kwaye ikhamera kaGoogle sele inenguqulo enikezelwe kuyo. Zizibuko lokuqala, ke ayizizo zonke izinto ezisebenza ngokuchanekileyo. Ke yonke into iyakuphuculwa ngaphezulu kweeveki xa kukhutshwa iinguqulelo ezintsha.
Ngelo xesha inokukhutshelwa kuphela njenge-APK uqobo, ukuze umsebenzisi ngamnye athathe isigqibo sokuba uyafuna okanye cha. Nangona ungalinda ithutyana, kuba ngokuqinisekileyo kwiiveki ezimbalwa iibugs ziya kulungiswa. Ke uyakonwabela ikhamera kaGoogle ngaphandle kweengxaki.
Enye yeenzuzo zale khamera kukuba iphatha ukulungiswa kwemifanekiso ngcono. Ke iya kuvumela ukusetyenziswa okungcono kwekhamera yangemva kathathu esiyifumana kule Xiaomi Mi A3. Le yinto enokuthetha ukuba neefoto ezingcono ngale fowuni ngalo lonke ixesha. Iinkcukacha ezibalulekileyo.
I-APK yesicelo inokukhutshelwa kule khonkco, kukhetho lomntu ngamnye. Ngokuqinisekileyo kubasebenzisi abaninzi abaneXiaomi Mi A3 luphuculo kwaye ibonelela ngeendlela ezintsha, ukuze babe nakho ukuthatha iifoto ezingcono nge-smartphone yabo. Ke ukuba unomdla ungayikhuphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » IXiaomi Mi A3 ngoku inokufaka ikhamera yeGoogle
Inkampani ejongene neTikTok sele isebenza kwiselfowuni yayo yokuqala
Uzibona njani zonke iifoto zakho kwimephu kunye ne-Samsung Gallery app